Murume anobatwa mboro nemachende kusvika yamira, kusvirwa ndekwe everyday vasikana - Masasi eHarare
DzeBonde Murume anobatwa mboro nemachende kusvika yamira, kusvirwa ndekwe everyday vasikana
Murume anobatwa mboro nemachende kusvika yamira, kusvirwa ndekwe everyday vasikana
Madzimai ngatisvirwei kana vanoda kutisvira varipo, takazoona kuti madzimai tirikuuraya dzimba dzedu nekusada kusvirwa,shuwa mukadzi wanhasi kushinga kupa murume akakubvisira roora time table yekusvira pasvondo se bhazi rekwa Chiendambuya.
Shuwa mukadzi kurara husiku hwese nemurume no kusvirwa wakato mupfekera tight kana night dress kutoti mamuka sei! Night dress nderekupfeka wakuenda ku toilet or uchigadzirira pekurara asi kana wakurara murume ngaakubate pese pese without disturbances ye night dress or tight.
Unoti murume wako mamuka sei, anomuka sei akarara nenzara yebeche asina kusvira, husiku hwese asina kusvira wototi wangu haana basa nekusvira iye arara jende richirwadza nechikara. Murume anobatwa mboro nemachende kusvika yamira, kusvirwa ndekwe every day asikana hanty ndiyo yatakavinga here, nemasikati e weekend aye tumaiwo vana vaende kure musvirane as long mukana uripo.
Vana amai ukaona usina kusvirwa ngwarira pane kwaatosvira chete wakativava mumba imomo uchiti handidi zvekutsimbirirwa ini askana, vabereki vako vachitambira roora vaitopa permission kumurume wako kuti munhu takupa ngaasvirwe chaiko ndizvo zvaari kuvinga kumba kwako.
Nei tichikundwa nema small house anoziva kuti murume wemunhu chaanoda isviro, murume achisvika ku small house asati aita chimwe chinhu small house inenge yatovhura makumbo kudhara nokuti inoziva kuti avinga kuzosvira neku reliever stress yaapiwa nemukadzi wake, anozoti maswera sei atopedza kusvirwa kuziva chokukoshesa mboro yatopukutwa kare nemvura inodziya kuti adzokere asina kasmell yebeche.
Murume anobatwa mboro